Indlwana Yomlingo: Ikhaya le-Radagast the Brown - I-Airbnb
Indlwana Yomlingo: Ikhaya le-Radagast the Brown
432 okushiwo abanye
Upsala, Minnesota, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Jill
U-Jill Ungumbungazi ovelele
Izinyathelo zokuphepha ze-COVID-19: Indawo engaphezulu iyahlanzwa/ifafazwe ngesifutho esilwa namagciwane.
Bona izinkanyezi! Indawo yethu ebiyelwe engamahektha angu-2+ (bona i-a-peaceful-dragon.com ngohambo lokuhamba) ihlanganisa ubhavu oshisayo futhi ingamakhilomitha angu-3 ukusuka echibini (ukugibela izikebhe, ukudoba nolwandle oluhle olwehlayo). I-Soo Line Trail inokuqwala izintaba, ukuhamba ngebhayisikili nokuhamba eqhweni. I-Upsala iqinile ezweni lamapulazi. Ikhaya lethu liqhele ngamamitha angu-100 ukusuka ekotishi; nezihlahlana zinikeza ubumfihlo. I-Wi-Fi. Ipaki, ibha kanye neretshurenti ebangeni lokuhamba ngezinyawo. Ukuhlukahluka kwamukelekile.
I-cottage ngokwayo inhle futhi ilula. Amapulangwe ayo avunwa endaweni futhi aklanywe ngobuciko futhi ahlotshiswa, enendawo ephakemeyo ephezulu efinyelelwa ngesitebhisi, nendawo yokuhlala ethokomele eneziko legesi. Kukhona umpheme omkhulu kakhulu ongu-20' X 30' onezihlalo ngaphambi kwekotishi, umpheme omncane, ozimele ngaphandle komnyango wevulandi ongemuva, kanye nompheme omboziwe. Indawo ngokuvamile ithule futhi inokuthula. Idolobha liyakwamukela! Mina noJoan siyakwamukela!
4.91 out of 5 stars from 432 reviews
4.91 · 432 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-432
I-Upsala iyidolobha elincane elikhulu. Abantu banobungane futhi banenhlonipho. Sinemakethe yenyama enhle edolobheni eyenza awabo amabhuleki--njengophayinaphu/jalapeno--kanye nobhekeni owine umklomelo. Siphinde sibe nenkampani yezimoto ethuthukayo, ibhizinisi le-inthanethi, indawo yokuphuzela utshwala emnandi enamabhega aphambili neziphuzo eziwumphumela wezivakashi zethu (ngokuthenga ukudla), kanye nendawo yokudlela esezingeni eliphezulu. Ukugibela izintaba, ukuhamba ngebhayisikili, ukugibela izikebhe, ukuhamba eqhweni konke kuyatholakala eduze.
Ngivame ukusebenza ekhaya ngakho ngikhona ukuze ngiqinisekise ukuthi unakho konke okudingayo/okufunayo. Umgomo wami uwukuhlinzeka ngobumfihlo okungenzeka ukuthi uze lapha ukuze ukuthole.
UJill Ungumbungazi ovelele